Madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee dalka Spain oo weerar culus ku qaaday maamulka La Liga – Gool FM
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee dalka Spain oo weerar culus ku qaaday maamulka La Liga
(Spain) 07 Sab 2018. Madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee dalka Spain Luis Rubiales oo si xun u weeraray maamulka horyaalka La Liga uu hogaaminayo Javier Tebas, sababa la xiriira go’aankii ay kusoo jeediyeen in kulamo qaar ee horyaalka lagu ciyaaro dalka Mareykanka.
Javier Tebas ayaa dhawaan ku dhawaaqay in kulanka Barcelona iyo Gerona lagu ciyaari doono dalka Mareykanka, kaasoo ka tirsan kulamada 21-aad ee La Liga, ee la qorsheeyay in la ciyaaro 27-ka bisha Janaayo ee soo aadan.
Laakiin wargeyska “The Guardian” ayaa soo xigtay wareysi uu dhawaan bixiyay madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee dalka Spain Luis Rubiales, kaasoo uu ku weeraray maamulka La Liga.
“Javier Tebas waxa uu la hadlay dadka oo dhan marka laga reebo kuwii mudnaa inuu la hadlo, waa arin aan la fahmi Karin, wuxuuna lumiyay ixtiraamka”.
“Tebas wuxuu iska indho tiray xiriirka kubada cagta ee dalka Spain, ciyaartoyda iyo xitaa kooxaha, wuxuuna la galay shirkad gaar ah heshiis gaarsiisan mudo dhan 10-15 sano, isagoo aan wax ogolaansho ah ka heysan xiriirka, marka aan aragno waxa dhaca”.
Tababare Luis Enrique oo si weyn u amaanay Sergio Ramos, muxuuse ka yiri David de Gea?